Zvakanakisa zvevhiki muActualidad iPhone (XXX) | IPhone nhau
Zvakanakisa zvevhiki muActualidad iPhone (XXX)
Imwe imwe svondo nyowani, nyika iri kungotenderedza Apple Watch. Mune Actualidad iPhone tinoita zvese zvinogoneka kuti tiwane nhau dzine hukama neiyo iPhone, asi zvinotoita zvisingaite, zvese, zvese zvese zvinotenderera neApple Watch. Sezvauchazoziva uno weChishanu, vashandisi vakachengeta yavo Apple Watch musi waApril 10, vatanga kugamuchira mamodheru ekutanga uye mawebhusaiti akasarudzika vatotanga kuita bvunzo dzekutanga kuti vaone kana zvakataurwa naApple zvaive zvechokwadi kana kuti zvainge zvave zvishoma neimwe nzira.
Isu tinotanga neyakajairika kuparara kwe ivo vakomana vanobva kuFixit, avo vakabvisa chigadzirwa chose uye zvinoshamisa Vakawana oximeter sensor inotibvumidza kuyera huwandu hweoxygen muropa, asi inomiswa mufekitori. Chimwe chinhu chitsva icho vashandisi vawana mumazuva ekutanga ekushandisa ndechekuti charger ye Apple Watch inotsigira isina waya kuchaja QI. Pakati pekusiyana kwatinowana muApple Watch, tinoona kuti iyo modhi Sport uye yemhando yesimbi yakarongedzwa mumabhokisi akasiyana uye zvakare charger yezvose zvakasiyana, sezvo iyo Sport modhi yakagadzirwa nepurasitiki uye iyo simbi inogadzirwa nealuminium.
Iyo yekutanga iOS 9 pfungwa, mwedzi nehafu musangano wevandudziri usati wagadzirwa neApple pamwe neshanduro nyowani yeOS X. Uye nepo Isu tinotarisira kuti tinogona kunakidzwa neJailbreak muIOS 8.3 (haisipo kubva iOS 8.1.2), muIpad News tinoramba tichitsikisa ma tweaks anonyanya kufarira anouya kuCydia: PrismBoard isu tinogona kupa kubata kwemavara kune iyo keyboard ye iPhone yedu, uye na Particle WallPapers isu tinokwanisa kuwedzera masimba akasimba kune yedu kifaa.
Ndinovimba svondo rino rinodzokera pane zvakajairwa uye nhau dzakanangana neiyo iPhone dzinotanga kutenderera zvakare, kana iyo Apple Watch yatove mumaoko evashandisi uye makuru makuru eiyo mudziyo atoitwa pachena.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zvakanakisa zvevhiki muActualidad iPhone (XXX)
Apple Watch inokwenudzwa nyore uye nyore kugadzirisa